Global Voices teny Malagasy · 17 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 17 Novambra 2018
Oseania17 Novambra 2018
Ity herinandro ity tao Israely: androm-pifidianana androany – marsa 2006
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Novambra 2018
Nandeha tany amin'ny biraom-pifidianana ny Israeliana androany mba hifidy governemanta vaovao. Nitabataba ny fampahalalam-baovao nanomboka tamin'ny 10 maraina fa ambany dia ambany ny tahan'ny fandraisana anjara, na dia tsy mikatona raha tsy tamin'ny 10 alina aza ny birao fandatsaha-bato.
Tontolon'ny bilaogy Saodiana mandritra ny herinandro – nov 2005
Somary mangingina noho ny tamin'ny herinandro lasa ity herinandro ity tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana. Na dia izany aza, mbola nahita lahatsoratra sasany mahaliana izahay. Indrisy fa amin'ny teny Arabo avokoa ny lahatsoratra aseho amin'ity herinandro ity.
Antso ho an'ny ekipa KatrinaHelp.info nandritra ny rivo-doza Katrina
Amerika Avaratra17 Novambra 2018
Brrrr ... Mangatsiaka be eto Afovoany Atsinanana no hafatra nirongatra tamin'ny bilaogy vao haingana. Ity famintinana izay nolazain'ireo bilaogera sasany momba ny hatsiaka ao amin'ny faritra, ao amin'ny toerana mafana sy indraindray mibaliaka masoandro manerantany.
Global Voices tao amin'ny Tambajotra Omidyar
Mediam-bahoaka17 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Napetraka ny fangatahana ho an'ny vondrona ao amin'ny tambajotra Omidyar. Nasaina hitsidika izany ny mpikambana raha mbola tsy tao anatin'izany. Vondrom-piarahamonina tena mahaliana mifototra amin'ny rafitra wiki/bilaogy manana rafitra malaza tena mahaliana izy io. Fifangaroana mpikambana mahaliana tsy toy...
Akon'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana – Aog 2005
Manoratra (amin'ny teny Frantsay) momba ny fanakona-masoandro (eclipse solaire) hitranga ao Tonizia amin'ny 3 Oktobra i Adib, izay saiky ho fanakona-masoandro tanteraka 98%. Tsara jerena indrindra avy eny an-tanàna atsimon'i Douz, vavahady ho an'ny Sahara Toniziana izany. Misy ny fetibe fanakona-masoandro ho atao any an-tanàna oasis atsimo any Tamerza.
Ny malaza ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana -okt 2005
Hatem manoratra momba ny volana masin'ny Ramadany sy ny fomba nanadinoan'ny olona sasany ny momba izany, manao izany ho volana ho an'ny sakafo. Heveriny fa tokony hiverina ao amin'ny Korany izy ireo mba hampahatsiahivana ny soa rehetra amin'ity volana ity.